REMAX WIRED MUSIC EARPHONE(RM-711),Earphone,Wired Earphone ,Best wired – Remax Online Shop
REMAX WIRED MUSIC EARPHONE(RM-711),Ea...
REMAX WIRED MUSIC EARPHONE(RM-711),Earphone,Wired Earphone ,Best wired earphone with mic ,Hifi Stereo Sound Wired Headset ,sport wired earphone ,3.5mm jack wired earphone ,3.5mm headset for mobile phone ,universal jack wired earphone,ကြိုးနားကြပ်,နားကြပ်
Silver - K4,500.00Pink - K4,500.00
ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ Song System ပိုင်း လုံး၀ ကျမသွားတဲ့ Remax ရဲ့
RM-711 WIRED MUSIC EARPHONE လေး။
အရည်အသွေးမြင့်ပြီး တုန်ခါမှု မြင့်မားတဲ့ adynimic Speaker လေးက
movie နဲ့ music တွေကို စိတ်ကြိုက်ခံစားမှု ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
နားထဲမှာ Fit ဖြစ်နေစေမယ့် နားကျပ်ခေါင်းလေးတွေနဲ့ Noise reducing ပါဝင်တဲ့
ဒီနားကျပ်လေးကို Black. White. Rosegold သုံးရောင်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါပြီ။
Name : WIRED MUSIC EARPHONE
Model : RM-711
Response Frequency : 20.20000(Hz)
Rated Power : 5mv
Output Sensitivity :98+2(dB)
Resistance : 32(Ω)